Ukhenketho ngesondo kunye nohenyuzo: Zeziphi iindawo ezikhuselekileyo?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » Ukhenketho ngesondo kunye nohenyuzo: Zeziphi iindawo ezikhuselekileyo?
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ICosta Rica Iindaba eziDlayo • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziUkreqa zaseUkraine • Iindaba ezahlukeneyo • Iindaba zaseVenezuela zokuPhula
Ukhenketho ngesondo- liMyuziyam enomdla
Abanye abahambi baceba ngokuthe ngqo ukuhamba ukuzalisekisa iminqweno yabo yesini. Yibize ngokuba yiholide ekhuthaza isini, ukuba uyafuna. Baphupha lokonwaba ngaphakathi izithili ezibomvu kwaye sijonge phambili kwizitudiyo ezenza inkanuko.
Akukho nto iphosakeleyo kuloo nto ukuba nje umhambi uthobela isidima sabathengisi ngemizimba. Umbono wabathengisi ngemizimba kufanele ukuba ubanike imbeko efanelekileyo. Kwaye abahambi kufuneka bakuphephe nakuphi na ukurhweba ngabantu okanye imisebenzi ebandakanya abantwana ekuxhatshazweni ngokwesondo.
Oko kuthethiweyo, zeziphi iindawo ezikhuselekileyo zokuthatha inxaxheba kukhenketho lwesini? Kwamanye amazwe, imboni yesini iyakonwabela ukukhuselwa kwegunya lokunyanzeliswa komthetho. Ukugcina oku engqondweni kwaye ujonge ezona ndawo zibalaseleyo zokhenketho ngesondo ekufuneka uziqwalasele, nazi i-10 zokubeka kuluhlu:
I-Thailand inezixeko ezithile apho ukhenketho ngesondo lukhuthazwa ngokungangqalanga. Ezo zixeko zixinene nabantu abathengisa ngemizimba, njengePattaya kunye neBangkok Red Light District. Ngapha koko, iBangkok ithweswe isithsaba njengeyona dolophu idumileyo yesini kwihlabathi.
Ukunyaniseka kubuninzi bayo bokuzonwabisa ngesondo, kuye kwabizwa ngokuba yiparadesi yabathengisi ngesondo. Kukho amanenekazi avumayo ukutshintshisa iinkonzo zawo ngenxa yemali enkulu yomhambi. Oku kuchanekile kangangokuba kukhuselekile ukuthi kukho umntu osebenza ngesondo kuzo zonke iinyawo zeBangkok.
Kodwa kusemthethweni? Ngokwenyani, hayi. Ukhenketho ngesondo okanye ubuhenyu akuvumelekanga ngumthetho wombuso. Kusezantsi kolawulo lwamapolisa, kwaye urhulumente ubeka iliso kwishishini lezesondo ngenxa yezigidi zeedola ezingenayo kwi-GDP yesizwe.
ESingapore, ukuthengisa ngomzimba kusemthethweni kwaye kulawulwa ngumthetho, kodwa izinto ezimbi ezinxulumene nobunongogo ziphantsi koqwalaselo lwamapolisa. Ngenxa yoku, inkonzo yesondo kunye neentlawulo zayo zihlala zenziwa ngasemva kweengcango ezivaliweyo.
Ngelixa ubuhenyu busemthethweni, ii-pimping kunye ne-brothels azikho. Amapolisa asetyenziselwa ukujonga ngamehlo - oku kubonakala kungumxholo oqhelekileyo kwishishini lokwabelana ngesondo ngaphandle kwelizwe - kodwa izindlu zesondo ezidumileyo kufuneka zibukele ngenyameko ukuqinisekisa ukuba akukho zenzo zolwaphulo-mthetho kuloo ndawo.
ISingapore sisizwe esinika inkululeko kunongogo ukuba enze ishishini lakhe yedwa kwigumbi lakhe okanye endlwini yakhe kwiindawo ezaziwayo njengeGeylang Road, Orchard, Decker Road, kunye neKeong Saik Red Light District. Banokukwenza nakwiziko eliqeshiswe ngabo okanye kwihotele yabathengi.
Oonongogo kufuneka baye kuvavanyo lwezamayeza ukuze babone ii-STD kwaye kufuneka baphathe isatifikethi esichaza ukuba abazithwali naziphi na izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini.
IRiphabhlikhi yaseDominican sisigebenga kukhenketho ngesondo, kwaye ewe, lusemthethweni kwaye luphantsi kokhuseleko lokunyanzeliswa komthetho. Kodwa njengeSingapore, umntu akanakukwazi ukuqhuba i-brothel ukuze afumane imali kubathengisi bezesondo okanye kwiqela lesithathu. Umthengisi ngomzimba kufuneka afumane imali eyedwa.
Kwi-DR, abathengisi ngemizimba banokuba ngabasebenzi abazimeleyo ukuba banqwenela ukwenza njalo. Kwaye kukwakho nethuba lokuzibandakanya kushishino lokuthengisa ngesondo kwindawo eyaziwa njengeendawo eziphezulu.
EUkraine, eKiev naseOdessa zaziwa njengeyona dolophu yokhenketho yezesondo ethandwa kakhulu elizweni. Ukhenketho ngesondo alukho mthethweni apha, kodwa akukho thuba lingako lokuphazanyiswa ngumthetho. Ezi zixeko zi-2 zineeklabhu zemicu kunye neeplastiki zokuthambisa ezenza yonke indawo.
Abahambi bezesondo ukuya eUkraine benza ukuba kungabikho ukuba baphoswe kukutyelela eKiev naseOdessa apho banokufezekisa khona iminqweno yabo yesini ngoncedo lwabasetyhini nabesilisa baseUkraine.
Isithili sokukhanya esibomvu esidumileyo eJapan zizitalato zaseRoppongi eTokyo. Kodwa kukho ukubanjiswa kokuhamba ngesondo kweli lizwe.
Ngelixa iJapan inandipha inani elikhulu labakhenkethi bamazwe aphesheya, abantu ababhinqileyo abasebenza ngesondo abawathandi amadoda aphesheya. Abafazi baseJapan bahlala bekholelwa ukuba uhlobo lwesini olufunwa ngamadoda angaphandle lurhabaxa kwaye kubo oku akunqweneleki.
Kunye noko, abalithandi ivumba lomzimba labaphambukeli kwaye bafumanisa isithintelo kulwimi sisithintelo ekuzibandakanyeni ngokwabo ukwanelisa iimfuno zabathengi ngesondo.
Ngaba uyazi ukuba iipesenti ezili-10 zabo bonke abaya eCosta Rica baya phaya ngesondo? Yintoni eyenza ukuba ilizwe lithandwe kangaka? Ngaba amaxabiso alungile? Ngaba abasebenzi banobuchule nje?
Ewe, mhlawumbi, kodwa ubukhulu becala kungenxa yokuba e-United States of America, ubuhenyu abukho mthethweni, kwaye neCosta Rica ayikho kude kangako.
Ngapha koko, uninzi lwabantu abafudukela e-US ababandakanyekayo benza ubuhenyu eCosta Rica ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80.
E-Venezuela, abasetyhini baneempawu ezixabisekileyo kakhulu ezenza ukuba kube sisishwankathelo sendlela yokwenene yobuhle obakha bafunyanwa eMhlabeni. Oku kuyinyani ngenani labafazi baseVenezuela abafumene iwonga likaMiss World.
Ubunongogo busemthethweni, kwaye umsebenzi wesondo yinto eqhelekileyo, ngakumbi eCaracas. Esi sixeko sihamba kunye neenkonzo zokuhanjiswa kolonwabo kubahambi bezesondo.
Ii-brothels zikwakhona apha, kunye neeplastiki zokuthambisa umzimba kunye neendawo zokuthambisa ngesondo.
ISpain inakho konke ukuthetha - iwayini, ukulwa neenkunzi, kunye nohenyuzo olusemthethweni. Izithili ezikhanyayo ezibomvu eSpain zininzi kwaye ziyasebenza.
Kwaye nakwidolophu apho kungekho sithili sibomvu, umhambi ngesondo kunokwenzeka ukuba afumane unongogo olungele ukubonelela ngeenkonzo zakhe ngemali entle.
I-Indonesia inegama elibi ngokurhweba ngabantu ngokuthengisa abantwana ngokwesondo, ke abo bahamba ngesondo bayacetyiswa ukuba babenononophelo malunga nalapho bafumana khona amava ezesondo.
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokufumana isondo e-Indonesia kukusebenzisa i-Intanethi. Kukho imisesane yobuhenyu kunye neeforamu zobunongogo anokufikelela kuzo umntu osabelana ngesondo ngeendaba zentlalo.
E-Gili nase-Bali, ukhenketho ngesondo aluthethwa apha ngokungekho mthethweni-akukho mthethweni-ke lumkiso luyacetyiswa.
Ngoku iAmsterdam yaziwa kakhulu ngeZithili zokukhanya okuBomvu. Apha, ubuhenyu busemthethweni kwaye bukhuselekile ngokupheleleyo. Banenxalenye yewebhusayithi yabo enikezelwe kwiiNgingqi eziBomvu.
Umntu unokuya ezivenkileni ngefestile ngokuhamba nje kudlula kwiindawo zoonongogo kwaye ujonge oonongogo kwiifestile.
Kukwakho nomyuziyam wesondo apho abahambi bokwabelana ngesondo banokufunda khona izinto ezintsha malunga nolonwabo lwenyama olubandakanya uthando lwenyama.
ubuhenyu isini ukhenketho ngesondo